Ọkachamara ọkachamara na mkpokọta na Ngwaọrụ Mgbakwunye Ntanetị
Nchịkọta weebụ gụnyere ọrụ nchịkọta data weebụ site na iji crawler weebụ . Ndị mmadụ na-eji ihe ntanetịpụta data ntanetị iji nweta ozi bara uru site na ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ike ịnwe maka mbupụ gaa ebe nchekwa nchekwa mpaghara ma ọ bụ nchekwa data dịpụrụ adịpụ. Ngwudata ihe ntanetị weebụ bụ ngwá ọrụ nke a ga - eji mee ihe iji weghasị ma wewe ihe ubi weebụ dị ka ụdị ngwaahịa, dum weebụsaịtị (ma ọ bụ akụkụ), ọdịnaya yana foto. Ị nwere ike inwe ike ịnweta ọdịnaya weebụ ọ bụla site na saịtị ọzọ na-enweghị onyeọrụ API maka ịnagide nchekwa data gị.
N'okwu a SEO, e nwere ụkpụrụ ndị bụ isi nke ọrụ nchịkọta data ntanetịime ndị a - grain storage insects. Ị ga-enwe ike ịmụta ụzọ ududo na-emepụta usoro nkwụsị iji chekwaa data weebụ na usoro nhazi maka nchịkọta data nchịkọta weebụ. Anyị ga-atụle ihe nchọgharị weebụ nke BrickSet. Ngalaba a bụ ebe nrụọrụ weebụ dabere na mpaghara nke nwere ọtụtụ ozi banyere LEGO. Ị ga-enwe ike ịmepụta ngwá ọrụ mgbapụta Python nke nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ BrickSet ma chekwaa ozi dị ka data data na ihuenyo gị. Ihe ntanetị weebụ a nwere ike ịgbasa ma nwee ike itinye mgbanwe mgbanwe n'ọdịnihu n'ọrụ ya.
Ihe dị mkpa
Maka onye na-eme ihe nchọgharị weebụ, ị chọrọ ebe mmepe obodo nke Python 3. Nke a na-agba ọsọ oge bụ Python API ma ọ bụ Software Development Kit maka ime ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke ngwa weebụ crawler weebụ gị. E nwere nzọụkwụ ole na ole nke mmadụ nwere ike ịgbaso mgbe ị na-eme ngwá ọrụ a:
Ịmepụta ihe nchịkọta isi
Na nke a, ị ga-enwe ike ịchọta ma budata ibe weebụ nke weebụsaịtị. Site na ebe a, ịnwere ike iwewe ibe weebụ ma wepu ozi ịchọrọ n'aka ha. Asụsụ dị iche iche nke mmemme ga-enwe ike imezu mmetụta a. Onye na-arụ ọrụ gị ga-enwe ike ịkọwa ihe karịrị otu peeji n'otu oge, yana inwe ike ichekwa data na ụzọ dị iche iche.
Ikwesiri iwere akwukwo azu nke ududo gi. Dịka ọmụmaatụ, aha ududo anyị bụ bricket_spider. Ihe mmepụta kwesịrị ịdị ka:
eriri koodu a bụ Python Pip nke nwere ike ime n'otu aka ahụ na eriri:
eriri a na - ekepụta ndekọ ọhụrụ. Ị nwere ike ịnyagharịa na ya ma jiri iwu ndị ọzọ dị ka mmetụ aka dị ka ndị a: